Iapile, iFacebook, uGoogle kunye neAmazon: Ungaludlulisa njani udliwanondlebe lwabo olunobukrwada - Ezintsha
Eyona Ezintsha I-Apple, iFacebook, uGoogle, uMdliwanondlebe oPhezulu waseAmazon utyhila iimfihlo zoMsebenzi wokuPhupha ngokuHamba
I-Apple, iFacebook, uGoogle, uMdliwanondlebe oPhezulu waseAmazon utyhila iimfihlo zoMsebenzi wokuPhupha ngokuHamba
Iinkampani zobuchwephesha obuphezulu beSilicon Valley zifana nomazibuthe onamandla, zitsala uninzi lwezona millennial zibalaseleyo neziqaqambileyo ezifuna ngamandla ukusebenza apho. Kodwa kuwo wonke umsebenzi onqwenelekayo, baninzi kakhulu abafaki-zicelo kunokuba banokuqeshwa.
Ukuba ufuna ukungena emnyango kwenye yezi nkampani zidume ngokukhethekileyo, ufuna ukuthetha nomntu ofana noGayle Laakmann McDowell. Wayesebenza njengenjineli yesoftware kwaApple, Microsoft kunye noGoogle, apho wayehleli khona kwikomiti yokuqesha-kwaye wayekhe wangowokuqala kwiipesenti ezi-1 ngokodliwanondlebe olwenziwe kwi-tech giant. UMcDowell ukwasebenza neAmazon, Facebook, Uber kunye neYahoo ukubanceda batsale kwaye bagcine italente ephezulu.
UMcDowell, onesidanga se-bachelor's kunye nesidanga sekhompyuter kwiYunivesithi yasePennsylvania kunye ne-MBA yaseWharton, ukwangumbhali weencwadi ezintathu zobuchwephesha, kubandakanya Ukuqhekeka udliwanondlebe lweKhowudi , eyiNombolo 1 yokuthengisa incwadi kwiindidi ezintathu zeAmazon: uphuhliso lwesoftware, ukuzingela imisebenzi kunye nodliwanondlebe.
Xa uMbonisi wayethetha noMcDowell, ingcebiso yakhe yasibetha njengokudlula nje ukudlula kubagcini-masango kwiinkampani zobuchwephesha eziphezulu-izaliswe zizifundo eziphambili zendlela yokuphumelela kwishishini nakubomi.
Nantsi yonke into ekufuneka uyazi, ngokubaliswa nguMcDowell kuMbonisi:
Qonda inkcubeko. Kuvakala ukuba kuyahlekisa kodwa iinkampani zobuchwephesha eziphezulu zeSilicon Valley zihlala zithintela icandelo lezeshishini kwimisebenzi yazo. Iinjineli zibona ukuba zisebenzela iivenkile zobunjineli hayi amashishini axineneyo. Yintoni eqhuba iinjineli luthando lwabo lobunjineli kunye nokwakha izinto ezipholileyo ngokwenene kubathengi-hayi eyonyusa umgca osezantsi. Ikomkhulu likaGoogle.UJustin Sullivan / Getty Izithombe
Akukho konke malunga nesidanga. Kukho uluvo oluphosakeleyo lokuba ufuna isidanga sekhompyuter ukuze ufumane umsebenzi kwenye yeenkampani zobuchwephesha eziphezulu zeSilicon Valley. Kodwa oko akunjalo kwaphela. Owona mqobo mkhulu abaviwa abangenaso isidanga sekhompyuter abajongana nawo ayikokungabikho kolwazi, kukungakhuseleki ukuba baphoswa sisoso semfihlo ngexesha lenkqubo yodliwanondlebe. Ngokukhawuleza xa ndibuza umbuzo obonakala ngathi uyimfundo, bathi abanakuyenza nangona benolwazi ngokupheleleyo kunye nezakhono zokujongana nayo. Into abasilelayo ukuyiqonda kukuba iingxaki zenzelwe ukuba zibe nzima wonke umntu .
Yithathe inketho kwezobuchwephesha. Iinkampani zobuchwephesha zinomkhethe omkhulu kubagqatswa abanesakhono sobugcisa, nokuba awufaki sicelo somsebenzi wekhowudi. Ukuba ufuna ukusebenza kwinkampani yetekhnoloji, kuyo nayiphi na indima, kufuneka ubonakalise uthando lwetekhnoloji. Nabani na onokuchitha impelaveki kwi-intanethi efunda iziseko zendlela yokubhala ikhowudi elula. Hayi, ngekhe wakhe usetyenziso lwe-iPhone kwimpelaveki. Kodwa unokufunda ngokwaneleyo kwiziseko ukuze ufumane ukuqonda okufanelekileyo kwenkqubo yenkqubo yesoftware emalunga nayo. Ndithembe: Ayothusi le nto ucinga.
Yakha into ngokwakho. Ukuba sele usebenza kuGoogle kwaye ufuna ukuya kuFacebook, ngekhe ubenangxaki yokwenza ukutsiba. Kodwa uza kuthini ukuba uyikhowudi kwinkampani yeinshurensi eMidwest? Ukuba uthumela i-resume yakho kuGoogle, akunakulindeleka ukuba ume ngaphandle. Ke unokwenza ntoni? Isicwangciso esiliqili esihle kukuba uqale iprojekthi-nayiphi na iprojekthi-ngokwakho. Iinkcukacha azibalulekanga kunenyaniso yokuba uthatha ubunini bento kwaye ubonise inyathelo kwaye uqhube. Ke qala ishishini elincinci. Yakha usetyenziso lwakho. Yenza nantoni na efunekayo ukubonisa iingcinga zakho zeshishini. Uya kuphuhlisa izakhono ezintsha kwinkqubo, kwaye inokwenza umahluko omkhulu kwindlela obonwa ngayo.
Musa ukutshata nesakhono esinye. Nokuba yeyiphi na indima yakho, ungatshatanga kwisakhono esinye, ubuchule obunye, okanye indlela enye yokubona umhlaba. Ukuba ungumdwelisi wenkqubo, oko kuthetha ukuba awunakunamatheliswa ngokupheleleyo kulwimi olunye. Ngamanye amaxesha, xa abantu benodliwanondlebe, banokucaca ukuba bakrelekrele-kodwa ngokuncomekayo banamathele kulwimi olunye lwenkqubo. Xa kucaca ukuba abafuni kusebenza nayo nayiphi na into eyenye, loo nto iyakhathaza. Inyaniso yokuba umgqatswa khange asive isidingo sokufunda izakhono ezingakumbi iyakhathaza. Ukutshintsha kweemfuno, ukutshintsha kweeprojekthi, amaqela atshintshayo. Iinkampani zobuchwephesha zixabise ukungabinangqondo kunye nokuguquguquka. Nokuba unomdla ngokukodwa kwinto enye, hlala uvulelekile ukuhambisa umkhombandlela omtsha. Abasebenzi bakaFacebook badlula kudonga lwegrafiti kwikomkhulu laseMenlo Park.URobyn Beck / AFP / imifanekiso kaFetty
Ithoba ukuya kwi-5 alonelanga. Kwiinkampani zobuchwephesha obuphezulu, umsebenzi wecandelo langaphandle awuyiyo into eyahlukileyo- kulindelwe. Nokuba awunalo ixesha lokwakha into ngokwakho, njengoko kucetyisiwe apha ngasentla, kufuneka uhlale ucofa ecaleni. Ndikhe ndasebenza nomgqatswa kuGoogle ngendima yomphathi wemveliso. Ngexesha lodliwanondlebe, waqala wathetha ngendlela azigcina ngayo iinkukhu endlwini yakhe. Wayenomdla obugqithisileyo ngokwakha umnyango wehhoko elalivula lize livale ngokuzenzekelayo ukulawula iintshukumo zeenkukhu. Kuvakala ngathi bubudenge, kwaye ayinanto yakwenza nenkcazo yomsebenzi wakhe we-9-to-5, kodwa ibonakalise ukuthanda kwakhe ukusebenzisa izisombululo zobuchwephesha kwiingxaki zehlabathi lokwenyani.
Ziqhelise, Ziqhelise, Ziqhelise. Nokuba yeyiphi indima oyifaka isicelo, iinkampani eziphezulu zobuchwephesha ziya kuvavanya amandla akho ngovavanyo lokusombulula iingxaki. Ukusebenza kwakho kuya kuphucuka ngokuziqhelanisa-ke kubalulekile ukuba wenze njalo. Iinkampani ziyazi ngokubaluleka kokuziqhelanisa kangangokuba ngoku zithumela imathiriyeli yokulungiselela kubagqatswa ngqo. (Abaqashi bakaGoogle bathumela abaviwa kwiincwadi zam kwaye u-Facebook undiqeshile ukuba ndifundise udliwanondlebe lokulungiselela udliwanondlebe lwabagqatswa babo.) Unokuqiniseka ngoku: Ukhuphiswano lwakho luyaziqhelanisa.
Nxiba ukudibanisa. Ukuba uhamba kwinkampani ye-tech enxibe isuti kunye ne-tie, uya kujonga ngaphandle kwendawo kwaye ubonakalise ukuba awuyiva inkcubeko yabo. Uyakujongeka njengomnye waba bantu baxakekileyo kwishishini. Kwiinkampani zobuchwephesha, iyunifomu yodliwanondlebe esemgangathweni yijean kunye nomphezulu omnandi okanye ihempe; kwisinxibo somsebenzi kunokuba yinto eqhelekileyo. Ndikhumbula ngokucacileyo omnye umgqatswa wangena kudliwanondlebe lomsebenzi e-Apple enxibe isuti kunye neqhina. Wayekrelekrele kakhulu, ene-MBA evela eWharton, kwaye wakhawuleza waqonda ukuba unxibe kakhulu. Njengoko udliwanondlebe lwaluqhubela phambili, waqala ukukhulula iqhina lakhe, emva koko walikhupha ngokupheleleyo, kwaye ekugqibeleni waphosa ibhatyi yakhe ngasemva kwesitulo. Uwufumene umsebenzi.
Udliwanondlebe lwakho luza kuba ngumceli mngeni: Ziqhelanise nalo. Qonda ukuba injongo yodliwanondlebe nenkampani yetekhnoloji kukuvavanya izakhono zakho ngexesha lokwenyani. Udliwanondlebe kuGoogle, Facebook, Amazon, naseApple kunjalo hayi incoko nje malunga nempumelelo yakho edlulileyo. Kuyinyani oku kudliwanondlebe kwindima nganye. Ukuba uyikhowudi, oko kuthetha ukuba ungazazi ngcono iikhonsepthi zakho zesayensi yekhompyuter-kwaye uziqhelanise nokuphendula imibuzo enzima ngazo. Ukuba ufaka isicelo sendima yolawulo lwemveliso, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ukulungele ukubonisa uyilo lwemveliso kunye nezakhono zobungakanani kubhabho. Ukuba ukuthengisa, unokuqiniseka ukuba iingxaki zentengiso ziphoswa kuwe.
Musa. Nika. Phezulu. Ngonaphakade. Amaxesha amaninzi abantu bafumana ingxaki abangacingi ukuba bayayazi impendulo ngokukhawuleza kwaye bayayeka ukuziyekela. Nantsi into abangayiqondiyo: Udliwanondlebe uthatha ukuba awuyazi impendulo yombuzo. Oko bakuvavanyayo kukukwazi kwakho-kunye nokuzimisela-kwakho ukujongana neengxaki ezibonakala zixakile ngokupheleleyo. Bakhangele ukuba uqhubeke nokusebenza ukuze ufumane impendulo engcono nengcono.Ukuba uhlala uzincama khumbula oku: Inkqubo yodliwanondlebe yenzelwe umceli mngeni kuwe, kwaye nabagqatswa abagqwesileyo baziva bekhubekile. Umbuzo ngulo: Wenza ntoni ngokulandelayo?
Omnye umgqatswa kuGoogle ubuze kwabo baxoxa naye ngesidlo sasemini ukuba ziphi zonke iinkukhu ezishushu…. Akufuneki ukuba, umgqatswa akafumananga sibonelelo.
Bonisa inyathelo nokuba usemngciphekweni wokusilela. Nokuba uphi udliwanondlebe, ufuna ukuhambisa imvakalelo yenyathelo lokuqala. Nkqu namaqela kweenkampani ezinkulu zobugcisa athanda ukukholelwa ukuba asebenza njengokuqalisa. Bakuxabisile ukushukuma-kwaye nokusilela-ngokukhawuleza. Kwiinkampani zobuchwephesha, i-ethos kukuba kungcono ukuzama nokusilela kunokuba ungazami kwaphela. Ndakhe ndadlana indlebe nomgqatswa weAmazon owayefihle into endandicinga ukuba yeyona nto ibalulekileyo kuye. Wayeqale inkampani yokudlala ekufuneka ivalile iingcango zayo ngaphakathi kweenyanga ezintandathu. Khange ayizise kuba eyibona isilele. Kodwa, ezingqondweni zethu, ukuqala inkampani kwindawo yokuqala yayiyimpumelelo enkulu kuye.
Ungaze wonqene. Kukho udidi lomgqatswa endimchazayo njengonqenayo ngengqondo. Banokuba bakrelekrele kakhulu, bNgokukhawuleza xa befumana ingxaki enzima-enye apho eyona mpendulo ilungileyo ingatsibeli kubo-banokuncama okanye bacele uncedo.Yiflegi enkulu ebomvu leyo. Omnye umgqatswa endandidliwanondlebe naye kuFacebook wayeqaqambile-kodwa kuphela xa ndimnyanzela.Qikelela ukuba? Iinkampani zobuchwephesha ziyazi ukuba kwihlabathi lokwenyani, awuyi kuba nodliwanondlebe ekunyanzela ukuba unikele ngako konke. Ayinamsebenzi loo nto unako Ukujongana neengxaki ezinzima ukuba, ekugqibeleni, nguwe ngekhe . (Hayi, akawufumananga umsebenzi.) I-Apple's 'spaceship' entsha ye-175-acre campus ebizwa ngokuba yi-Apple Park e-Cupertino, eCalifornia, isondele ekugqityweni. Iya kuhlala abasebenzi abangama-13,000.UJustin Sullivan / Getty Izithombe
Ungathethi into ebubudenge kwaye uyijije yonke into. Iinkampani zobuchwephesha ziya kubude obukhulu ekungafikeleni kuzo njengequmrhu. Ngenxa yoko, abaviwa ngamanye amaxesha banokufumana i-chummy egqithileyo ngexesha lenkqubo yodliwanondlebe ngexesha, yithi, isidlo sasemini esingacwangciswanga. Omnye umgqatswa kuGoogle wabuza kwabo baxoxa naye isidlo sasemini ukuba ziphi zonke iinkukhu ezishushu. Isidlo sodliwanondlebe ngokubanzi asingenisi ingxelo yomgqatswa kodwa le yenze okwahlukileyo. Akufuneki ukuba, umgqatswa akafumananga sibonelelo. Iinkampani zeTechnology azixakekanga-kodwa iofisi ayisiyonto yomtshato.
Ubomi ngumdlalo weqela. Kwaye kuphuhliso lwesoftware. Ndikhumbula ngokucacileyo omnye umgqatswa kwi-LinkedIn owayengumvelisi oqaqambileyo-ukuba nje wayesebenza yedwa. Kodwa wayezikhusela ngokumangalisayo kunye neqela lakhe nanini na xa umntu enikezela ngengcebiso enobungozi. Inempembelelo enkulu kwikhondo lomsebenzi wakhe. Omnye umgqatswa, endikhe ndasebenza naye ngexesha lodliwanondlebe kuGoogle, angagxotha yonke ingxelo yam nge-yep-yep-yep ekhawulezileyo- kubandakanya, okuhlekisayo kukuba, impendulo yam kuye yokuba wayeyekile ukugxotha xa wayesenza lonto. Abaphenyi bahlala bekhangele ezo ntlobo zeeflegi ezibomvu. Ungabi ngomnye wabo bantu.
Hlala usesikhathini kwaye uzibophelele kwimfundo yobomi bonke. Kukho ulindelo kwiinkampani eziphezulu zobuchwephesha ozifunda ngokukhawuleza kwaye onwabele inkqubo yokufunda. Xa umntu esazi i-flavour ezili-10 ezahlukeneyo zeJava kwaye ayikho enye into, ndiyazibuza ukuba bazokuvuma na ukufunda izakhono eziyimfuneko kwindima entsha. Itekhnoloji kunye neendlela zitshintsha ngokukhawuleza kwaye kufuneka ube nakho ukuziqhelanisa ngesantya esifanayo. Akukho ndlela ibhetele yokuzikhusela ekuphelelweni lixesha kobungcali kunokukhulisa umdla wokufunda izinto ezintsha-nokuba azingqinelani ngqo nomsebenzi wakho ngoku. Indlunkulu yaseAmazon yaseYurophu, ebekwiClausen Valley eLuxembourg.U-Emmanuel Dunand / AFP / imifanekiso kaFetty
Soloko uyakha inethiwekhi yakho. Nokuba ufumana isibonelelo somsebenzi okanye akunjalo, hlala uqhakamshelana nabantu abaninzi odibene nabo kangangoko. Nokuba udliwanondlebe olungakhokeleli kunikezelo iselithuba lokwakha inethiwekhi yakho. Iinkampani zobuchwephesha zikhuthazwa yitalente kwaye nokwazi umntu olungileyo uhlala eyindlela eya kwisithuba sakho esilandelayo. Injongo kukugcina inethiwekhi yakho ibanzi kangangoko kunokwenzeka. Uninzi lwabantu, kubandakanya nam, aluzange luthunyelwe ngumhlobo kodwa ngumhlobo womhlobo. Iinkampani zobuchwephesha eziphezulu zilambe kakhulu ngenxa yetalente enkulu kangangokuba ukuhanjiswa akufuneki kube kufutshane. Thumela inqaku lombulelo okanye isicelo se-LinkedIn kumqeshi wakho kwaye uhlale unxibelelana.
Ayikaze iphele de uyeke ukufaka isicelo. Iinkampani zobuchwephesha zibeka ibar ephezulu kwaye ziyaqonda ukuba zihlala zibalahla abantu abalungileyo. Mhlawumbi wena, okanye umntu obuza naye, ubenosuku olubi. Okanye mhlawumbi kufuneka uphuhlise izakhono zakho useto oluthe kratya. Nokuba yeyiphi na indlela, kuqhelekile ukuba umgqatswa alahlwe aze emva koko afumane isithembiso kunyaka omnye okanye emibini kamva. Ungaze woyike ukufikelela kude kwakhona. Ukusilela kwakho okudlulileyo akunakubala ngokuchasene nawe.
Ndingaqiniseka njani? Ndaliwe xa ndiqala ukufaka isicelo kuGoogle soqeqesho. Kunyaka olandelayo, xa ndafaka isicelo sokusebenza ngokusisigxina, umntu owayefuna umsebenzi wakhawulezisa udliwanondlebe lwam kuba ndenze kakuhle, nangona ndingonelanga ngokwaneleyo, okokugqibela. Xa ndandiqeshiwe, ndaye ndaya kudliwanondlebe nabanye abaviwa abaninzi ababekhe balahlwa ngaphambili. Andikhathali nokuba umgqatswa uye waliwa kwixesha elidlulileyo ndihoya kuphela abanokukwenza ngoku.
Kutheni le nto iHBO Max yeXabiso elibiza amaXabiso inokuthi ibe sisiCwangciso esiqaqambileyo
UJennifer Lawrence Ukhulile Ngoku-Kwaye Ndiyayithiya
Isifundo esitsha sityhila ukungalingani kobuchwephesha beChemical kwiziyobisi zeSmartphone
Imanyano yezemfundo ifaniswa namanye amazwe
indlela yokubona i-starlink satellites ngokuhlwanje
wazi njani ukuba uyi-psychic
Iimfazwe zeenkwenkwezi ze-movie zilayini
uxinzelelo lwegazi olusezantsi kunyango lwendalo